राजधानीको अस्पतालमा ११ वर्षिया बालिका बलात्कृत ! «
राजधानीको अस्पतालमा ११ वर्षिया बालिका बलात्कृत !
प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७५, शनिबार ११:४९
नयाँदिल्ली । महिला हिंसा , बलात्कार जस्ता घटनाहरु भारत लगायत दक्षिण एसियाको प्रमुख समस्या हो । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रको लागि सरकारले कुनैं ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । अखबार ुहिन्दुस्तानु को अनुसार, शुक्रबार एक ११ वर्षीया केटीमाथि दिल्लीको आईएसआईसी अस्पतालमा बालिका बलात्कारको मुद्धा दायर भएको छ। समाचारअनुसार, एक सरसफाइकर्मिले उपचारको लागि ११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेका हुन । अभियोग विरुद्ध अभियुक्त दर्ता गरिएको छ, बलात्कार, अपहरण र पिक्सो को अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीको अनुसार, खराब स्वास्थ्य अवस्था पछि बच्चीलाई अस्पतालमा राखिएको थियो । बिबिसी
जघन्य अपराध बलात्कारको नेपालमा पछिल्लो साढे पाँच वर्षको बलात्कार तथ्याङ्क
आर्थिक वर्ष ०६९–०७० मा मुलुकभर ६७७ वटा बलात्कारका घटना भए । यीमध्ये पूर्वी नेपालमा मात्रै २ सय १७ वटा बलात्कार घटना भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा १ सय २९ वटा बलात्कारका घटना हुँदा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा ४० वटा बलात्कारका घटना घटे । आर्थिक वर्ष ०७०–०७१ मा ९ सय ५ वटा बलात्कारका घटना भए । यो आर्थिक वर्षमा ०६९–०७० मा भन्दा २ सय २८ बढी बलात्कारका घटना घटे । ०७०–०७१ मा पनि पूर्वमा २ सय ५८ वटा बलात्कारका घटना भए । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा २ सय बलात्कारका घटनामा प्रहरीमा उजुरी परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१–०७२ मा ९८१ वटा बलात्कारका उजुरी परेको देखिन्छ । यो वर्ष पनि पूर्वमा ३ सय २ वटा, काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ९१ र पश्चिमाञ्चलमा १ सय ७६ उजुरी परे । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ६० वटा बलात्कारका घटना भए । आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ मा १ हजार ८९ वटा बलात्कारका घटना घटे । यो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी पूर्वमै २ सय ९५ वटा बलात्कारका घटना भए । यो वर्ष ०७१–०७२ भन्दा १ सय ८ वटा घटना बढी भए । आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा यो संख्या बढेर १ हजार १ सय ३१ पुग्यो । चालु आवको माघसम्ममा ५ सय २९ वटा बलात्कारका उजुरी परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
बलात्कृत हुनेमा १५–१६ वर्षका किशोरी बढी
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बलात्कृत हुनेमा १५–१६ वर्षका किशोरीहरु बढी छन् । आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ को तथ्याङ्कमात्रै हेर्ने हो भनेपनि १० वर्षमुनिका २ सय १३ जना बालिका बलात्कारको सिकार भए । १५ देखि १६ वर्षमुनीका ३ सय ५० बालिका बलात्कृत हुँदा १९ देखि २५ वर्षमुनिका १ सय १८ जना, २६ देखि ३५ वर्षमुनिका १ सय ३१ र ३६ देखि ४५ वर्षमुनिका ६९ जना बलात्कृत भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपाने ग्रामीण भेग र गरिब परिवारका किशोरीहरू बढी बलात्कृत हुने गरेको बताउँछन् । ग्रामीण भेग र गरिब परिवारका युवतीले सहजै अरुको विश्वास गर्ने कारणले समस्या हुने गरेको उनको तर्क छ । नेउपानेको बुझाइमा समाज र परिवार सचेत नुहँदा बलात्कारका घटना बढीरहेका छन् ।
मुलुकी ऐन २०२० को महल १४ को ऐनअनुसार कसैले कुनै महिलाको मञ्जुरीबिना जवरजस्ती करणी गरेमा बलात्कार गरेको मानिन्छ । यस्तै १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरी लिई गरे पनि बलात्कार गरेको ठहर हुने कानुनी प्रावधान छ । १६ वर्षमुनीको विवाहलाई समेत नेपालको कानुनले अपराध मानेको छ । १० वर्षभन्दा मुनिकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १० वर्षसम्म कैद हुने काुननी व्यवस्था छ । १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा ८ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ भने १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद छ ।
१६ वर्षभन्दा बढी तर २० वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला बलात्कार भए दोषीलाई पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद हुने मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ । २९ वर्षभन्दा माथिकी महिलालाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवथा छ । सामूहिक बलात्कार, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई सबै सजायभन्दा थप ५ वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।